Nala Arka Falalka Foosha Xun ee ay Samaynayaan Taageerayaalka Jwxo-shiil, ee ku Dooda in ay Halgan ku Jiraan – Rasaasa News
Sep 7, 2009 Jwxo-shiil
In aan Halgan jirin oo la kala hadhay waa la hoobtee hoos ma loo dayey, waxaad rumaysan in wixii aan ka digaynay oo dhan maanta uu Jwxo-shiil dhex dabaalanayo, waxayna Jwxo maanta taagan tahay Cabdiliyo Isaaq oo warmaha isu lisanaya.
Allahayow noloshaydii maxaan talo bixiyey saa waxaaban ahay ninka Tuke la taliyey, hadii Aqoon yahan Jabhad ku dhex dhashay, ku dhex koray oo Jabhad dhalay jiirta lagaga bixi waayey, ma waxaa jiirta halganka naga saari baad islahaydeen; Jaahuur-gas Janan been ku qaatay oo aan Jabad Jabhadeed waligii galin oo jaga la isaga dhiibay jahwareerka uu dhaliyey Rabiyo naga jooji.
Jwxo-shiil iyo beeshiisii ku taageeri jirtay xaq darada ay lacagaha kaga uruursan jireen dadweynaha Somalida Ogadeeniya ee ay ku maal gashadeen xawaaladaha way dhamaatay. Wayna isgarteen in la fahamay oo aan la siin doonin shilin dambe oo ka soo baxa dadweynaha Somalida Ogadeeniya, hada waxay bilaabeen in ay Paltalka ka dagaalamaan iyaga oo ayna jirin wax alaale wax ay la hadhayaan waxay isku garab wadaan qabiil cay iyo heesihii dhiiri galinta lacagta lagu guri jiray.
Imaan la,aantu iyo hunguri xumadu waxay rogtaa aduun dhan, waan midaas mida daba gadiday halgankii ay waday Jwxo oo Ilaahayga weyn oo Somali Galbeed nagu galada mooyee ay adag tahay in uu sii socdo halgankii qoriga ee ummada Somalida Ogadeeniya.
Bal waxaad nala daawataan Cajaladan codka ah ee laga duubay Islaan la yidhaahdo Xaawo Luul Gaabow oo ah reer Afmadow oo uu adeer u yahay Jwxo-shiil, kana mid dadka uu Jwxo-shiil qaabilsiiyey in ay dadka ka hanuuniyaan Paltalka oo uu Madax u yahay Dhafoor moordi Ina Dhuubo.
Xaawo luul ma qabiiliistaa mise halgamaa bal ila dhagayso.